Shakhsiyeynta Suuqgeynta: 4 Furayaasha Aasaaska Guusha | Martech Zone
Talaado, Disembar 13, 2016 Khamiista, Diseembar 15, 2016 Douglas Karr
Shakhsiyeyn shakhsi ahaaneed ayaa ah xanaaqa hadda laakiin laakiin waa istiraatiijiyad cay noqon karta haddii si khaldan loo sameeyo. Aynu soo qaadanno tusaalaha ugu caansan - sidee buu dareemaa markaad hesho fariin iimayl ah meesha uu ka furmayo, Gacaliye %%Magaca koowaad%%… Miyaanay ahayn tan ugu xun? In kasta oo taasi ay tahay tusaale muuqda, haddana waxa yar ee muuqda ayaa u diraya dalabyo iyo waxyaalo aan khusayn bulshadaada. Taasi waxay u baahan tahay aasaas meesha yaal.
Taajirnimo, firfircoon, khibrado gaar ah oo si gaar ah loo bartilmaameedsaday ayaa nolosha u fududeynaya macaamiisha waxayna kordhiyaan waxtarka suuqgeynta suuqgeynta shirkadaha. Taasi runti waa guul-u-guuleysi qof walba.
Xogtan macluumaadka ah ee ka socota Xayeysiinta MDG waxay ku dhex socotaa xogta Adobe, Aberdeen Group, Adlucent iyo daraasado kale oo dhowr ah oo soo koobaya 4 aasaas oo muhiim u ah guusha.
Xeeladaha Smart iyo carrab la'aanta: Shakhsiyeyn shakhsi ahaaneed waxay ka dhigan tahay wax badan oo ka fudud oo ay ku jiraan magac. Shakhsiyeyn aasaasi ah ayaa saameyn yar ku leh kaqeybgalka; si kastaba ha noqotee, farriimaha ku saleysan ficilada gaarka ah ee isticmaalaha waxay leeyihiin sicir furan oo 2X ah iyo xaddiga guji 3X marka la barbar dhigo emayllada caadiga ah. Baro sida bartilmaameed firfircoon u yahay furaha dhabta ah ee hawlgelinta wax ku oolka ah.
Aragtida kaliya ee macaamiisha: Macaamiisha ayaa sheegaya in faa'iidooyinka ugu sareeya ee shaqsiyadeed ay yihiin xayeysiis / fariimo aan quseyn, helitaan deg deg ah oo alaab / adeegyo cusub ah, iyo isdhexgal tayo leh oo tayo sare leh Si aad u soo gudbiso khibradahaas oo aad uga faa'iideysato awoodda bartilmaameedka waxaad u baahan tahay taajir, si joogto ah u cusbooneysiiya astaamaha macaamiisha. Soo ogow sababta hal aragti oo macaamilku u yahay aasaaska guusha.
Xogta iyo nidaamyada: Shakhsiyan shakhsi ahaaneed iyo xogta / nidaamyadu iskuma xirna oo keliya, aasaas ahaan wey isku xidhan yihiin. Kuwa suuqleyda ah ee sheegaya inaysan shakhsiyeynin waxyaabaha, 59% waxay yiraahdaan caqabad weyn ayaa ah tikniyoolajiyadda halka 53% ay dhahaan waxay ka maqan yihiin xogta saxda ah. Raadi sida maalgashiga goobaha saxda ah iyo dadku u bixin karaan si aad u tiro badan.
Daahfurnaan iyo nabadgelyo: Dadku wali taxaddar kama qabaan shakhsiyadda maxaa yeelay iyagu ma hubo sida loo adeegsado iyo keydinta xogta. Taasi waa sababta xakamaynta iyo amniga ay muhiim u yihiin. Qaar ka mid ah 60% dadka isticmaala khadka tooska ah waxay rabaan inay ogaadaan sida degelku u xusho waxyaabaha loo qoondeeyay iyaga 88% macaamiisha ayaa doorbidaya inay go'aamiyaan sida loo isticmaali doono xogtooda shaqsiga ah. Fahmaan sida ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo walaacyadan.
Si aad u ogaato sida ugu badan ee xeeladahan loogu adeegsado astaantaada, iska hubi 4 Tallaabo oo lagu furayo Awoodda dhabta ah ee Shakhsiyeynta Suuqgeynta.
Tags: aragtida macaamiishahelitaanka xogtaData Securitydaahfurnaanta xogtaxayeysiis mdgshakhsi ahaaneedxogta shakhsi ahaaneedammaankadaahfurnaanta